ဒါတွေကြောင့် လက်မထပ်ပါနဲ့ – Shinyoon
သီးချိန်တန်သီး ပွင့်ချိန်တန် ပွင့်ရတယ် တဲ့ သီးချိန်တန်လို့ သီးတဲ့အခါ ပွင့်ချိန်တန်လို့ ပွင့်တဲ့အခါ စိတ်မညစ်စေချင်ဘူး ဒါကြောင့် . . . ဒီစာလေးကို ဆုံးအောင် ဖတ်ကြည့်ပါ
ကြာလာတဲ့အခါ ချစ်သွားမှာပါလို့တွေးပြီး ကိုယ်သဘောကျနှစ်သက်ခြင်းမရှိတဲ့လူကို လက်မထပ်နဲ့ ။ပိုင်ဆိုင်မှု သို့်မဟုတ်ငွေကြေးကြောင့် လက်မထပ်နဲ့ ။ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာ ငွေတစ်ခုတည်းနဲ့ မဆိုင်ဘူး ။တစ်ယောက်ယောက်ကို မေ့ချင်တဲ့အတွက် လက်မထပ်နဲ့ ။ကိုယ့်ဒဏ်ရာကို ကုစားဖို့ အခြားတစ်ယောက်ကို ဓားစာခံလုပ်တယ်ဆိုတာ မကောင်းဘူးလေ ။အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ မိုက်ရူးရဲဆန်ပြီး လက်မထပ်နဲ့ ။ဒုက္ခက အိမ်ရှေ့တံခါး၀ရောက်လာတဲ့အခါ အိမ်နောက်ဖေးကနေ အချစ်က ဆင်းပြေးသွားလိမ့်မယ် ။
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ ထင်သလောက်မလွယ်ဘူးအိမ်ထောင်ပြုလိုက်ဖို့လွယ်တယ် ဒါပေမယ့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင် တည်ဆောက်ဖို့ကျတော့ အရမ်းကို ခက်ခဲပါတယ်
တစ်ဘ၀လုံး ဆွဲမယ့်လက်က နားလည်မှု ၊ နွေးထွေးမှု ၊ လုံခြုံမှု ပေးနိုင်ရမယ် သစ္စာထားနိူင်ရမယ် ဒီလောက် လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီး ဘာကြောင့်လိုသလဲဆိုရင် ဘ၀ဆိုတာ တကယ်လျှောက်တဲ့အခါ ထင်သလောက် မတိုမှန်း သိလာပါလိမ့်မယ်
အဲ့ဒီ ခရီးလမ်းအရှည်ကြီးမှာ ကိုယ့်ဘေးနား ရပ်မယ့်လူက ကိုယ်နဲ့ ပန်းတိုင်ချင်းတူတဲ့လူပဲ ဖြစ်သင့်တယ်လေ ။
သီးခ်ိန္တန္သီး ပြင့္ခ်ိန္တန္ ပြင့္ရတယ္ တဲ့ သီးခ်ိန္တန္လို႔ သီးတဲ့အခါ ပြင့္ခ်ိန္တန္လို႔ ပြင့္တဲ့အခါ စိတ္မညစ္ေစခ်င္ဘူး ဒါေၾကာင့္ . . . ဒီစာေလးကို ဆုံးေအာင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ
ၾကာလာတဲ့အခါ ခ်စ္သြားမွာပါလို႔ေတြးၿပီး ကိုယ္သေဘာက်ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိတဲ့လူကို လက္မထပ္နဲ႔ ။ပိုင္ဆိုင္မႈ သို႔္မဟုတ္ေငြေၾကးေၾကာင့္ လက္မထပ္နဲ႔ ။ေပ်ာ္႐ႊင္ျခင္းဆိုတာ ေငြတစ္ခုတည္းနဲ႔ မဆိုင္ဘူး ။တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေမ့ခ်င္တဲ့အတြက္ လက္မထပ္နဲ႔ ။ကိုယ့္ဒဏ္ရာကို ကုစားဖို႔ အျခားတစ္ေယာက္ကို ဓားစာခံလုပ္တယ္ဆိုတာ မေကာင္းဘူးေလ ။အခ်စ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ မိုက္႐ူးရဲဆန္ၿပီး လက္မထပ္နဲ႔ ။ဒုကၡက အိမ္ေရွ႕တံခါး၀ေရာက္လာတဲ့အခါ အိမ္ေနာက္ေဖးကေန အခ်စ္က ဆင္းေျပးသြားလိမ့္မယ္ ။
အိမ္ေထာင္ေရးဆိုတာ ထင္သေလာက္မလြယ္ဘူးအိမ္ေထာင္ျပဳလိုက္ဖို႔လြယ္တယ္ ဒါေပမယ့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ တည္ေဆာက္ဖို႔က်ေတာ့ အရမ္းကို ခက္ခဲပါတယ္
တစ္ဘ၀လုံး ဆြဲမယ့္လက္က နားလည္မႈ ၊ ေႏြးေထြးမႈ ၊ လုံၿခဳံမႈ ေပးႏိုင္ရမယ္ သစၥာထားႏိူင္ရမယ္ ဒီေလာက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ဘာေၾကာင့္လိုသလဲဆိုရင္ ဘ၀ဆိုတာ တကယ္ေလွ်ာက္တဲ့အခါ ထင္သေလာက္ မတိုမွန္း သိလာပါလိမ့္မယ္
အဲ့ဒီ ခရီးလမ္းအရွည္ႀကီးမွာ ကိုယ့္ေဘးနား ရပ္မယ့္လူက ကိုယ္နဲ႔ ပန္းတိုင္ခ်င္းတူတဲ့လူပဲ ျဖစ္သင့္တယ္ေလ ။
သည်းခံမှုမှာလဲ သူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူ ရှိပါတယ်
တချို့လမ်းတွေကတော့ ရွေးချယ်ပြီးသွားရင် နောက်ပြန်လှည့်ခွင့် မရှိတော့ဘူး